Adeegyada Caafimaadka Xubinta - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Adeegyada Caafimaadka Xubinta
Community Health Plan ee Washington (CHPW) waxay bixisaa adeegyo caafimaad oo kala duwan si wax looga qabto caafimaadka bukaankaaga oo dhan. Waxaan haynaa barnaamijyo bilaash ah oo ay heli karaan xubnaha leh xaalado caafimaad oo murugsan, waxaanan xubnaha ku xiraa ilaha bulshada si wax looga qabto arrimaha maalin walba saameeya caafimaadkooda.
Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka waxay ka kooban yihiin shaqaale caafimaad iyo kuwo aan daryeel caafimaad lahayn. Waxaan la xiriiri doonaa adiga iyo bukaankaaga si aan u abuurno qorshe daryeel wanaagsan.
Ma u baahan tahay caawimaad xagga luqadda ah? Haddii bukaanku u baahan yahay turjumaad ama adeegyo luqadeed si uu u helo barnaamijyada caafimaadka xubinta CHPW, waxaan siinnaa kuwaas. Waxbadan ka baro adeegyada luqadda ee CHPW.
Caafimaadka wanaagsan wuxuu ku bilaabmaa qorshe daryeel wanaagsan. Kooxda isku dubaridka daryeelka CHPW waxaa ka mid ah maareeyayaasha daryeelka kuwaas oo ka caawin doona xubnaha inay soo saaraan qorshe maarayn caafimaad iyaga oo maanka ku haya baahiyahooda caafimaad ee gaarka ah. Barnaamijyadani waxay taageeraan xiriirka ka dhexeeya adiga iyo bukaankaaga waxayna la socdaan sida ugu wanaagsan ee qorshaha daryeelka uu u shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo tilmaamo caafimaad iyo caddeyn ku saleysan.Waxbadan ka baro habka aan u maaraynayno caafimaadka
Maareynta kiiska ayaa loo heli karaa dhammaan xubnaha CHPW. Waxay waxtar weyn u yeelan kartaa xubnaha qaba xaalado caafimaad oo isku murugsan ama daba-dheer, badiyaa kuwa hela daryeel wax ka badan hal xaalad caafimaad. Maareeye kiis ayaa loo xilsaarayaa inuu ka caawiyo xubinta inuu ilaaliyo oo uu horumariyo caafimaadkooda. Waxaad bukaan socodka ugu gudbin kartaa bukaan socod eegto ama adeeg bixiye, ama iyaga ayaa isu gudbin kara.Waxbadan ka baro adeegyada maaraynta kiisaska
Barnaamijkeena Tababarka Caafimaadka wuxuu xubnaha baraa sida loo maareeyo xaaladooda daba dheeraatay. Barnaamijku wuxuu raadiyaa bukaanada qaba cudurka sokorowga, wadnaha oo isku xirma, neefta, iyo / ama cudurada sambabaha ee joogtada ah (COPD) waxayna kaqeyb gashaa si loo arko inay ubaahanyihiin caawinaad dheeri ah.Halkan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Tababbarka Caafimaadka
Caafimaadku waa ka badan yahay oo keliya inaad dhakhtar u tagto. Waxay ku saabsan tahay helitaanka wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu noolaato nolol maalmeedkaaga. Hadafkeenu waa inaan hubino in xubnaheena baahiyahooda aasaasiga ah la daboolay. Waxaan ku taageernaa iyaga oo ka raadinaya adeegyo iyo barnaamijyo kale beeshooda. Haddii bukaannadaadu u baahan yihiin caawimaad raadinta shaqo, gaadiid, cunto, ama guri muddo dheer ah, kooxdayada ayaa ku taageeri kara.Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ilaha ay bixiyaan Barnaamijyada Beesha
Qiimeynta Caafimaadka waa sahan kooban. Waxay eegaysaa caafimaadka xubnaha iyo qaab nololeedka ay hadda ku sugan yihiin waxayna tilmaamaysaa baahiyo caafimaad oo gaar ah. Shaqaalaheena Maareynta Caafimaadka waxay u isticmaalaan natiijooyinka si ay u abuuraan qorshooyin daryeel isla markaana ay xubnaha ugu dhigmaan adeegyada caafimaadka iyo caafimaadka.Waxbadan ka baro Qiimeynta Caafimaadka
Nolol-Caafimaad qab Wadnaha
Wadnahaagu waa muruqa ugu xoogan jidhkaaga. Laakiin waxay u xoog badan tahay sida daryeelka aad u siiso oo keliya. Baro waxyaabaha sababi kara cudur wadne iyo sida loo dhiso caadooyin caafimaad qaba. Waxbadan ka baro nolosha wadnaha-caafimaadka qabta
CHPW waxay dhiirrigelisaa sii socoshada iyo xasilloonida iyo kala-guurka daryeelka caafimaad ee daruuriga ah iyo is-dhexgalka adeegyada. Baro sida CHPW ugu dhowaato sii wadida iyo kala guurka daryeelka
Adeegyada Caafimaadka ee Faa'iidada Medicare
CHPW waxay siisaa adeegyo cayiman Medicare xubnaheena Medicare Advantage. Si aad wax uga ogaato waxa la bixiyo, booqo bartayada caafimaadka.
Caymiska Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Kaliya (BHSO)
Qorsheheena BHSO wuxuu daboolayaa adeegyada caafimaadka habdhaqanka, maskaxda, iyo shucuurta. Xubnaha qorshaha BHSO ee CHPW waxay ku heli karaan daryeel caafimaad iyaga oo u maraya Medicare, adeegyada caafimaadka qabyaaladda, ama qorshe kale. Baro waxa loo daboolay bukaankaaga BHSO.